Shut Up bese Uthanda Okuthunyelwe Okuhle?! | Martech Zone
Shut Up bese Uthanda Okuthunyelwe Okuhle?!
NgoLwesihlanu, Agasti 15, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lo ngumbuzo ongxoxwa kakhulu kunamazwana. Okuhlangenwe nakho kwami ​​ngokubhuloga ukuthi ukungaguquguquki kuyikho konke. Uma abafundi bakho belindele ukuba nokuqukethwe okusha nsuku zonke, bazobuyela kusayithi lakho nsuku zonke ukuthola lokho okuqukethwe. Umbuzo omuhle uthi:
Kukangaki isivakashi sizobuyela kuwebhusayithi yakho ukuzohlola okuqukethwe okusha ngaphambi kwabo Ima ubuya?
Kade ngenza uvivinyo muva nje. Akuyona indlela yesayensi engiyithathile, kepha lapho ngibhala ifayili le- okuthunyelwe kwebhulogi ku-Starbucks lokho kunakwe kakhulu (A), nginqume ukukwenza Asigibele ukubona ukuthi kuzokwenzekani.
Inothi elilodwa elithandekayo ukuthi okuthunyelwe kwakuthandwa cishe amahora angama-72 (B) ngemuva kokubhalwa. Kubonakale kuthatha usuku ukuthi abantu bagaye okuqukethwe bese kuba nosuku olwengeziwe lokuphendula nokubhala ngakho kumabhulogi abo. Lokhu-ke, kubuyise ithrafikhi esizeni sami usuku lwesibili. Ngosuku lwesithathu (C), kepha ukunakwa kwase kuphelile futhi ibhulogi yabuyela emazingeni ayo ajwayelekile ezivakashi zansuku zonke (kungafaki ababhalisile be-2,000 RSS).
Iqiniso lokuthi ibhulogi ibuyele emazingeni ajwayelekile (kuze kube yilapho i- I-Tuned ku-Calculator debut) Kusho kimi ukuthi Digg or Ngikhubeke Ithrafikhi, noma ikhuthaza, akusiyona leyo traffic engiyilandelayo. Laba yi-surfers beqiniso - ukuthola okuqukethwe okuthokozisayo ngaphandle kepha abangabuyeli okunye. Ngilandela abantu ababuyayo - abantu ababhalisela kokuphakelayo kwami, abavakashela njalo, futhi babambe iqhaza ezingxoxweni engizibeke lapha.
Esimweni esijwayelekile semidiya, bengizovumela i-buzz iqhubeke ngaphambi kokuyiphazamisa ngokuthunyelwe okusha nangesihloko esisha. Ngangiyoqhubeka nokuzama 'ukugibela igagasi', mhlawumbe ngize ngiqhubeke nengxoxo kokuthunyelwe okungu-2 noma oku-3 okungeziwe. Yize lokho kungenzeka kusize ekugcineni inani le- (B) okwesikhashana izivakashi ezingithole amahora angama-48 kuya kwangu-72 ngemuva kokuthunyelwe, nginqume ukuthi kufanele ngiqhubeke nokuthumela nsuku zonke - okwami core abafundi (C) abaqhubeka nokubuyela kubhulogi yami.
Kulula ukugcina abafundi kunokuthola okusha. Ukugxuma kuleyo diggwagon kufana nokusuka emjahweni wejubane uye kugijima. Imarathon yakha ukufundwa okuyisisekelo, ukuhamba ngokungaguquguquki nangokuzimisela, ukuhlangabezana nokulindelwe ababhalisile bakho abasemqoka. I-sprint iyindlela ekhathazayo yokwenza abanye bavotele wena, ukubhala isixhumanisi okuqukethwe okulindelwe, nokuzama nje ukunqwabelanisa indunduma entsha yabafundi besikhashana nsuku zonke. Ungakwenza, kepha anginasiqiniseko sokuthi uzokwazi ukuqeda umjaho noma cha.
Tags: Ama-Analyticsbakopelezangena kumaumabokuizibalo ze-pinterestukukhushulwa kwe-pinterest
Siqhathanisa Nawe! Ingabe Uthulile?
Izinyathelo ze-3 Zokuvikela i-Blog yakho kwi-Big, Fat Lawsuit
Aug 15, 2008 ku-10: 24 AM
Ngicabanga ukuthi ushaye isipikili ekhanda ngalokhu. Kungafaneleka ukuthi abezindaba abakhulu noma izinhlangano zihlale empumelelweni ngaphambi kokudlulela esinyathelweni sabo esilandelayo, kepha kumabhulogi ngamanye, kunengqondo kakhulu ukunamathela ekukhipheni okuthunyelwe kaningi futhi okunenjongo ukubhekana nezithameli ezivamile. Vele ukukhanya okuvela ngezikhathi ezithile kuma-pan diggers noma izikhubekiso kuyindlela enhle yokuziguqula zibe ezijwayelekile.
Ngibe nokuthunyelwe okuthandwa kakhulu kubhulogi lami, kepha ukunakwa bekuyohlala kufinyelela ezingeni elijwayelekile ngemuva kwesonto noma kunjalo ekuvakasheni okujwayelekile + ezingeni labaguqukayo.
Ngicabanga ukuthi ukubhala okuqukethwe okuhloselwe i-digg / okumnandi / ukukhubeka njalo emasontweni ambalwa kubalulekile ukwenza abantu abasha bathole isayithi lakho. Ngakho-ke, imarathon yayo yansuku zonke, kepha i-sprint ngezimpelasonto 🙂
Aug 16, 2008 ku-6: 49 AM
Ukuzazisa okumangazayo ezindabeni ezigcina ibhulogi / isayithi iqhubeka njalo. Ngiyethemba ukukubona uzungeze eThe Bean.
Sep 4, 2008 ngo-5: 00 PM
Ngiqaphele lo patter ofanayo womjikelezo wamahora angama-48 kuye kwangama-72 futhi ngizamile ukukhulisa ngenqubo ye-hybridi yokubuyela kokuthunyelwe okuthandwayo kepha ngisaqhubeka ngondla okuthunyelwe okunengqondo kulayini wabajwayelekile. Ithemba ukuthi ukuphindwa kokuheha okusha kuzogcina ama-newbies azungeze isikhathi esanele ngokwanele ukubona ikhwalithi yemali ejwayelekile yokugibela. Ukufundwa kwami ​​kuncane kepha selokhu ngasebenzisa le ndlela sengikhulise ukufundwa kwami ​​okujwayelekile (isilinganiso sokugoqa sezinsuku eziyishumi) cishe ngama-25% ezinyangeni ezine ezedlule.